चकलेट र दूधजन्य खानेकुरा खाँदा डण्डिफोरको समस्या आउँछ : सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडा चकलेट र दूधजन्य खानेकुरा खाँदा डण्डिफोरको समस्या आउँछ : सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडा चकलेट र दूधजन्य खानेकुरा खाँदा डण्डिफोरको समस्या आउँछ : सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडा Canada Nepal
चकलेट र दूधजन्य खानेकुरा खाँदा डण्डिफोरको समस्या आउँछ : सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडा
क्यानाडा नेपाल बैशाख १२ २०७८
काठमाडौं । चर्मरोग भनेको छाला सम्बन्धी रोग हो। जुन खुट्टाको पैतालादेखि टाउकोसम्म हुन सक्छ। कपाल र छालामा हुने रोग तथा अनुहार, नङ, सौन्दर्यता तथा यौनरोग पनि यससँग सम्बन्धित छ। त्यसैगरी, छाला रोगका लक्षणहरु फरक फरक हुन्छन्। छाला रोगमा विशेषगरी चिलाउने र कुनै कुनै बेला पोल्ने समस्या हुन्छन्। तर, चर्मसँग यस्तो रोग पनि सम्बन्धित छन्, जसमा कुनै लक्षणहरु देखिँदैनन्।
उदाहरणका लागि कुनै एक व्यक्तिलाई दुबी आएको छ भने उसलाई दुख्ने, पोल्ने समस्या हुँदैन। तर, पनि उक्त रोगले उसलाई मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेको हुने चर्मरोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडाले क्यानडानेपालसँगको कुराकानीमा जानकारी दिए । यसैगरी, कुष्ठरोगको प्राथमिक चरणमा केही थाहाहुँदैन। यसमा सुरुवाती दिनमा छाला फुस्रो हुने तर दुख्ने, पोल्ने समस्या नदेखिने उनले बताए।
त्यसैगरी, अहिले युवाअवस्थामा बढी देखिएको भनेको डण्डीफोरको समस्या हो। यसमा पनि लक्षण वा विना लक्षणको समस्या देखिने गर्छ। विशेषतया, यो किशोर अवस्थामा देखिने समस्या हो। यो समस्या १२ देखि १३ वर्षको उमेर समूहबाट देखिन सुरु गर्छ ।
यतिबेला शारीरिक अंगहरुको विकास र शारीरिक रुपमा पनि परिवर्तन देखिने हुँदा यसबेला डण्डीफोरले सताउन सुरु गर्छ । यस बेला हर्मोनहरु पनि शरीरमा बढ्ने हुँदा चिल्लो पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थीहरु सक्रिय हुन्छन् र डण्डीफोर आउने समस्या बढ्ने डा. ललन खतिवडाले जानकारी दिए ।
किशोर अवस्थामा महिला तथा पुरुष दुवैमा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढी हुने भएकाले चिल्लो पदार्थ निकाल्ने ग्रन्थीहरु सक्रिय हुन्छन् र शरीरको ठाउँ ठाउँमा जमेर बस्छन् र त्यस ठाउँमा ब्याक्टेरियालाई जन्म दिन्छ, जसले गर्दा डण्डीफोर आउने गर्दछ। उमेर बढ्दै गएपछि मुहारबाट डण्डीफोर हराउँदै जान्छन्, किनभने उमेर बढ्दै जाँदा हर्मोनहरुको सक्रियाता पनि घट्दै जाने डा. खतिवडाले जानकारी दिए।
अध्ययनहरुले र खानेकुरा र डण्डीफोर कुनै सम्बन्ध छैन । तर, सुत्ने बानीमा चाहिँ डण्डीफोरको सम्बन्ध हुन्छ। नयाँ अध्ययनहरुले खानेकुराहरुको पनि डण्डीफोरको सम्बन्ध रहेको पुष्टि गरेको भेटिएको छ। चकलेटहरु खाँदा टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढ्ने गर्दछ र शरीरमा चिल्लोपना बढी निस्कासित हुने गरेको देखिएको छ। त्यसैगरी, दुधजन्य खाद्य पदार्थले पनि टेस्टोस्टेरोन हर्मोन बढ्ने गर्छ।
डण्डीफोरको समस्या र निदानसँगै छालाजन्य विभिन्न रोग र यसका उपचारका विषयमा चर्मरोग तथा सौन्दर्य विशेषज्ञ डा. ललन खतिवडासँग क्यानडानेपालकर्मी पूजा श्रेष्ठले गरेको भिडिओ अन्तर्वार्ता :
बैशाख १२, २०७८ आइतवार ११:१९:४१ बजे : प्रकाशित
# डा. ललन खतिवडा
# चकलेट र दूधजन्य
काठमाडौं - सोमवार काठमाडौं उपत्यकामा थप ३ सय ९४ जनामा कोरोनाभाइरसको संक्रमण देखिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा थप कोरोना संक्रमित हुनेमा काठमाडौंका २ सय ८५ जना, ललितपुरका ६६ जना र भक्तपुरका ४३ जना रहेका छन् ।
यस्तै मुलुकभर पछिल्लो २४ घण्टामा १२ सय ८२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ७ लाख ९२ हजार ३ सय ६७ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९० हजार ८ सय ५४ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १२ सय ६२ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ६२ हजार ४ सय १६ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निको हुने दर ९६.२ प्रतिशत रहेको छ ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप ७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार १ सय ३ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आश्विन ११, २०७८ सोमवार १८:०५:४२ बजे : प्रकाशित
उपचारका लागि बैंकक जाँदै वर्षमान पुन
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुन आफ्नो उपचारको लागि थाइल्याण्डको बैंकक जाने भएका छन् । पुनलाई उपचारको लागि बुधबार बिहान बैंकक लगिने पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ । उनको बैंककस्थित समितिभेज अस्पतालमा उपचार गरिने भएको छ ।
जण्डिसका कारण बिरामी परेका पुनको अहिले सुमेरु अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ । उनको शरीरमा देखिएको जण्डिस बढेको छ । जसका कारण उपचारको लागि उनलाई बैंकक लैजान लागिएको हो ।
आश्विन १२, २०७८ मंगलवार १३:३०:२० बजे : प्रकाशित
कात्तिक ७ र ८ गते बालबालिकालाई भिटामिन ’ए’ खुवाइने
काठमाडौँ - कात्तिक ७ र ८ गते बालबालिकालाई भिटामिन ’ए’ खुवाइने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार ६ देखि ५९ महिनाका बालबालिकालाई भिटामिन ’ए’ क्याप्सुल, १ देखि ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई जुकाको औषधि खुवाइने भएको हो।
६ देखि २३ महिनाका बालबालिकाहरुलाई बहुसुक्ष्म पोषक तत्व बालभिटा पनि दिइने भएको छ। यसअघि कात्तिक २ र ३ गतेका लागि तय भएको कार्यक्रमको मिति दशैंका कारण परिवर्तन गरिएको थियो।
आजै मन्त्री खड्काले बहराइनका आफ्ना समकक्षी अब्दुल लतीफ बिन राशिद अल ज्यानीसँग भेट गरे। भेटमा उनीहरूले मानव संसाधन, व्यापार, लगानी र पर्यटनको क्षेत्रमा द्विपक्षीय सहयोगबारे छलफल गरेका थिए।रासस
आश्विन १२, २०७८ मंगलवार १४:३१:५० बजे : प्रकाशित
काठमाडौँ। सरकारले पछिल्लो २४ घण्टामा मुलुकभर थप ११ सय ५८ जनामा कोरोनाभाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ ।
मंगलवार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकाअनुसार १४ हजार ३ वटा परीक्षण गर्दा ११ सय ५८ जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको हो । यससँगै कूल संक्रमितको संख्या ७ लाख ९३ हजार २ सय ७१ (पीसीआर टेस्टबाट) र (एण्टीजेनबाट) ९१ हजार १ सय ८ पुगेको छ।
साथै पछिल्लो २४ घण्टामा १३ सय १८ जना कोरोनाभाइरस संक्रमणमुक्त भएसँगै निको हुनेको कूल संख्या ७ लाख ६३ हजार ७ सय ३४ पुगेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । निको हुने दर ९६.३ प्रतिशत रहेको छ । यस्तै हालसम्म सक्रिय संक्रमित १८ हजार ४ सय २२ जना रहेका छन् ।
यसैगरी पछिल्लो २४ घण्टामा मृत्यु भएका र त्यसअघि भएका गरी थप १२ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। हालसम्म कोरोनाभाइरस संक्रमणबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या ११ हजार १ सय १५ जना रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आश्विन १२, २०७८ मंगलवार १८:०३:३० बजे : प्रकाशित
काठमाडौं - सेप्टेम्बर महिनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण दर ८.३ प्रतिशत मात्र रहेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले कोरोना परीक्षण गरिएका मध्ये सेप्टेम्बर महिनामा ८.३ प्रतिशतमा मात्र संक्रमण रहेको जनाइएको छ ।
अगस्ट महिनामा १३.६ प्रतिशत रहेकामा सेप्टेम्बर महिनामा त्यो झरेर ८.३ प्रतिशत मात्र रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । यस्तै, मन्त्रालयका अनुसार सेप्टेम्बर महिनामा कोरोनाविरुद्धको खोप पहिलो मात्रा ३१.३ प्रतिशत र पूर्ण मात्रा २८.३ प्रतिशतले लगाइसकेका छन् ।
अगस्ट महिनामा २४.५ प्रतिशतले पहिलो मात्रा र २०.५ प्रतिशत जनसंख्याले पूर्ण मात्राको खोप लगाइसकेका थिए । अहिलेसम्म एक करोड २९ लाख ५८ हजार ५०८ जनाले कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाइसकेका छन् ।न्युज कारखाना
आश्विन १३, २०७८ बुधवार ०७:०४:२८ बजे : प्रकाशित